Afrika Atsimo - Wikipedia
Republic of South Africa ((en))
Republiek van Suid-Afrika af
IRiphabliki yaseMzantsi Afrika xh
IRiphabliki yaseNingizimu Afrika zu
IRiphabliki yeSewula Afrika nbl
Repoblikan'i Afrika Atsimo ((mg))
Teny filamatra : « !ke e: ǀxarra ǁke » (ǀXam)
Teny ofisialy fiteny afrikaans, fiteny anglisy, fiteny ndebele (isindebele), fiteny xhosa (isixhosa), fiteny zulu (isizulu), fiteny sotho avaratra (sepedi), fiteny sothodu atsimo (sesotho), fiteny tswana (setswana), fiteny siswati (siSwati), fiteny venda venda (tshivenda), fiteny tsonga (xitsonga).
Tanana lehibe indrindra Johannesburg
- Filohan'i Afrika Atsimo Repoblika
Azo tsy kaontiana
- hakitroka faha 27
49 052 489 mpo.
Anaran'ny mponina Afrikanina
IDH (2006) 0.670 (moyen) 125
Sandam-bola Rand (ZAR)
Hiram-pirenena Nkosi Sikelel'iAfrika/Die Stem
I Afrika Atsimo dia firenena ao amin' ny faritra atsimo ao Afrika, manana velaran-tany mirefy 1 219 090 km². Mamaritra azy avy ao avaratra i Namibia, i Bôtsoana, i Zimbaboe, i Môzambika ary i Esoatiny, ao atsinanana ny Ranomasimbe Indiana, ao andrefana ny Ranomasimbe Atlantika. I Lesôtô indray dia firenena rakotra tanteraka ao anatin' i Afrika Atsimo
Miisa eo amin' ny 48,7 tapitrisa eo ho eo (araka ny lazain' ny census tamin' ny taona 2008) ny mponina ao. Be harena an-kibon' ny tany i Afrika Atsimo (volamena, diamondra sns.), ireo harena ireo no anisan' ny mahatonga azy ho firenena matanjaka indrindra ao Afrika.
I Afrika Atsimo dia any amin' ny farany atsimon' i kôntinanta afrikanina. Ny toetaniny dia karazana toetany mediteraneanina manodidina ny Cap ary toetanin-jana-pehin-tany ny any avaratra sy any antsinanana. Maimaina ny toetany any amin' ny morontsiraka atlantika. Vakivain' ny tendro Drakensberg ny tapany atsinanan' i Afrika Atsimo.
47 556 900 ny isan' ny mponina any Afrika Atsimo. Ny tanàna lehibe indrindra any Afrika Atsimo dia ny tananan' i Cap (2 984 100 mponina), Durban (2 531 300 mponina) ary Johannesburg (1 975 500 ponina) sy Pretoria (1 473 800 mponina), araka ny lazain' ny faminavinana tamin' ny taona 2004.
Ny faritany afrikanina tatsimo sivy
Manana faritany sivy i Afrika Atsimo (hatramin' ny taona 1994 katramin' izao). Ireto avy ny lisiny:
Cap andrefana (Western Cape) Any atsimo andrefan'i Afrika Atsimo sy ny nosin'ny Pince Edouard.
Cap avaratra (Northern Cape): Any avaratra ilay faritan'ny Cap taloha
Cap antsinanana (Eastern Cape)
KwaZulu-Natal : Natal sy Zululand
Firenena mizaka-tenan'i Orange (Free State)
Avaratra Andrefana (North West)
Limpopo : Faritra Transvaal-Avaratra taloha, notononina faritra avaratra tamin'ny 1995 hatramin'ny 2002.
Foko ao Afrika Atsimo: Lemba (vahoaka) -
↑ Filaharana IDH 2008
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Afrika_Atsimo&oldid=1040779"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 14:59
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 14:59 ity pejy ity.